Teny tsara indrindra avy amin'i Voltaire - Victor Mochere
François-Marie Arouet, fantatra amin'ny anarany penina Voltaire, dia mpanoratra, mpahay tantara ary filozofa frantsay momba ny Fahazavana nalaza noho ny fahaizany, ny fanakianana ny Kristianisma - indrindra ny Fiangonana Katolika Romana - ary ny fanandevozana, ary koa ny firotsahany ho amin'ny fahalalahan'ny olombelona. kabary, fahalalahana ara-pivavahana, ary fisarahana ny fiangonana sy ny fanjakana. Voltaire dia mpanoratra maro be sady nanan-karena, namokatra asa amin'ny endrika literatiora rehetra, anisan'izany ny tantara an-tsehatra, tononkalo, tantara, andrana, tantara ary fampirantiana siantifika.
Nanoratra taratasy 20,000 2,000 mahery sy boky sy bokikely XNUMX XNUMX izy. Izy no iray amin'ireo mpanoratra voalohany nalaza sy nahomby ara-barotra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izy dia mpiaro ny fahalalahana sivily ary tandindonin-doza tsy tapaka noho ny lalàna henjana momba ny sivana nataon'ny mpanjaka frantsay katolika. Ny adin-tsainy dia naneso ny tsy fandeferana, ny dogma ara-pivavahana ary ny andrim-panjakana frantsay tamin'ny androny. Ny sanganasany malaza indrindra sy ny magnum opus, Candide, dia novella iray izay maneho hevitra, mitsikera ary maneso ny fisehoan-javatra maro, mpandinika ary filozofia tamin'ny androny.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Voltaire dia voatanisa etsy ambany.
"Ny lehilahy tian'ny vehivavy tsara tarehy dia hiala amin'ny olana." - Voltaire
“Tsy mety ho tsara kokoa noho ny olom-pirenena misy azy ny Fanjakana iray. Ny asantsika ankehitriny dia tsy ny hamolavola fanjakana fa ny fanaovana olom-pirenena. ” - Voltaire
"Ny teny maneso dia tsy manaporofo na inona na inona." - Voltaire
"Ny zava-drehetra dia ho an'ny tsara indrindra amin'ny tontolo tsara indrindra." - Voltaire
“Ny olona rehetra dia nateraka nanana orona sy rantsantanana folo, nefa tsy nisy nateraka tamin’ny fahalalana an’Andriamanitra.” - Voltaire
“Ny olona rehetra dia afaka araka ny maha izy azy; noho izany dia manana fahafahana tsy isalasalàna hiala amin’izay tianao ianao, nefa hanana fahasahiranana maro sy lehibe hatreo amin’ny fandalovana ny sisin-tany.” - Voltaire
"Ny fisainan'ny lehilahy rehetra dia tsy mendrika ny fahatsapana ny vehivavy." - Voltaire
“Manana tombony toy izany ny biby raha oharina amin’ny olona: tsy mandre ny famantaranandro mitomany izy ireo, maty tsy misy eritreritra ny amin’ny fahafatesana, tsy manana teolojiana hampianatra azy, tsy voahelingelina amin’ny fotoam-pialan-tsasatra amin’ny lanonana tsy tiana sy tsy mahafinaritra, ny fandevenana azy tsy misy vidiny, ary tsy misy manomboka fitoriana noho ny sitrapony. - Voltaire
“Zavatra mahafinaritra ny fankasitrahana. Mahatonga ny zavatra tsara amin’ny hafa ho antsika koa izany.” - Voltaire
"Ao ambadiky ny lehilahy mahomby rehetra dia misy rafozam-bavy gaga." - Voltaire
“Noho ny tsy fahafahako manao izay hahay handanjalanja kokoa ny olona, ​​dia naleoko faly lavitra azy ireo.” - Voltaire
"Tandremo ny teny hoe 'fiarovana anatiny', fa antsoin'ny mpampahory mandrakizay izany." - Voltaire
"Ankino amin'izay mitady ny fahamarinana fa mitandrema amin'izay mahita azy." - Voltaire
"Tsy dia mahazatra loatra ny saina mahazatra." - Voltaire
“Sahia misaina ho an’ny tenanao.” - Voltaire
“Na dia betsaka aza ny boky, dia vitsy ny olona mamaky! Ary raha mamaky teny mahasoa ny olona iray, dia ho tonga saina hoe hatraiza ny hadalana azon’ny andian’omby vetaveta ateliny isan’andro.” - Voltaire
“Ny fifandirana dia aretina lehibe mahazo ny olombelona; ary ny fandeferana no hany fanafodin’izany. - Voltaire
"Ny dokotera dia mametraka zava-mahadomelina izay kely fantany amin'ny vatana izay tsy dia fantany loatra amin'ny aretina izay tsy fantany akory." - Voltaire
"Aza mieritreritra fa ny vola no manao ny zava-drehetra sao dia ho vitanao ny zavatra rehetra ho an'ny vola." - Voltaire
"Ny fisalasalana dia toe-javatra tsy mampahazo aina, fa ny fahatokisana dia mampihomehy." - Voltaire
“Ny mpilalao tsirairay dia tsy maintsy manaiky ny karatra atolotry ny fiainana azy; fa rehefa eo am-pelatanana izy ireo, dia izy irery no tsy maintsy manapa-kevitra ny amin’ny fomba filalaovana ireo karatra mba hahazoana ny lalao.” - Voltaire
"Ny olona tsirairay dia zavaboary amin'ny vanim-potoana iainany ary vitsy no afaka manandratra ny tenany ho ambony noho ny hevitry ny fotoana." - Voltaire
"Ny olona rehetra dia meloka amin'ny soa rehetra tsy nataony." - Voltaire
"Ny finoana dia ny finoana izay tsy azon'ny antony." - Voltaire
"Ny adala dia mankafy ny zava-drehetra amin'ny mpanoratra malaza." - Voltaire
“Ny adala dia manana fahazarana mino fa ny zavatra rehetra nosoratan'ny mpanoratra malaza dia mendri-piderana. Ny ahy kosa dia namaky fotsiny aho mba hampifaliana ny tenako ary izay mifanaraka amin'ny tsiroko ihany no tiako.” - Voltaire
"Tsy hampianatra antsika ny atao hoe fanahy ny boky metafizika efatra arivo." - Voltaire
“Nomen’Andriamanitra antsika ny fiainana; anjarantsika ny manolotra ny tenantsika amin’ny fanomezana ny fiainana tsara”. - Voltaire
“Andriamanitra dia faribolana izay misy ny foibeny na aiza na aiza ary tsy misy manodidina na aiza na aiza.” - Voltaire
"Andriamanitra dia mpanao hatsikana milalao amin'ny mpihaino izay matahotra ny hihomehy." - Voltaire
“Tokony ho tsy mahalala na inona na inona izy satria mamaly ny fanontaniana rehetra apetraka aminy izy.” - Voltaire
"Ny tantara dia fandalinana ny heloka bevava eran-tany." - Voltaire
“Tsy miverimberina mihitsy ny tantara. Manao izany foana ny olona.” - Voltaire
“Izaho no zavaboary tsara tarehy indrindra eto an-tany, nefa efa namono telo aho, ary izy roa lahy dia mpisorona.” - Voltaire
"Tsy azoko an-tsaina hoe ahoana no mety hisian'ny famantaranandron'izao rehetra izao raha tsy misy mpanamboatra famantaranandro." - Voltaire
“Tsy fantatro izay alehako, fa efa an-dalana aho”. - Voltaire
"Halako ny vehivavy satria fantany foana ny misy azy." - Voltaire
“Nisafidy ny ho faly aho satria mahasoa ny fahasalamako izany.” - Voltaire
“Efa valopolo taona ny andro niainako nefa tsy mahalala na inona na inona momba izany, fa ny mametra-pialana sy milaza ny tenako fa ny lalitra dia teraka hohanin’ny hala sy ny olona ho lanin’ny alahelo.” - Voltaire
“Tsy mbola nanao vavaka iray monja tamin’Andriamanitra aho, dia vavaka fohy dia fohy: Tompo ô, ataovy ho adaladala ny fahavaloko. Ary nomen’Andriamanitra izany.” - Voltaire
“Efa in-jato aho no te hamono tena, nefa mbola tia ny fiainana ihany. Io fahalemena mampihomehy io angamba no iray amin'ireo fironana adaladalantsika kokoa, satria misy vendrana kokoa noho ny fahazotoan-komana hitondra enta-mavesatra izay tian'ny olona hanary an-kafaliana, ny maharikoriko ny maha-izy azy nefa mbola mitazona azy mafy, mitia azy. ny bibilava mandevona antsika mandra-pandevona ny fontsika? - Voltaire
“Mihazona mafy ny hevitro tany am-boalohany aho. Izaho rahateo dia filozofa.” - Voltaire
“Mahafantatra boky maro izay nandreraka ny mpamaky azy aho, nefa tsy fantatro izay nanao tena ratsy.” - Voltaire
"Tiako ny handry eo an-tongotrao ary ho faty eo an-tsandrinao." - Voltaire
“Aleoko mankatò liona tsara, matanjaka lavitra noho ny tenako, toy izay voalavo roan-jato amin’ny karazana ahy.” - Voltaire
“Tena mahafinaritra ny gilasy. Mampalahelo fa tsy ara-dalàna izany.” - Voltaire
“Raha namorona antsika araka ny endriny Andriamanitra, dia manana mihoatra noho ny namaliany isika.” - Voltaire
"Raha tsy nisy Andriamanitra, dia tsy maintsy namorona azy." - Voltaire
"Raha misy fiainana any amin'ny planeta hafa, dia ny tany no fialokalofan'ny Universe." - Voltaire
"Raha izao no tontolo tsara indrindra azo atao, inona ary ny hafa?" - Voltaire
"Raha tsy mahita zavatra tena mahafinaritra isika, farafaharatsiny dia hahita zava-baovao." - Voltaire
“Raha manana fivavahana roa eo amin’ny taninareo ianareo, dia hifamotika ny tendany roa; fa raha manana fivavahana telopolo kosa ianareo, dia handry fahizay”. - Voltaire
"Raha mila lalàna tsara ianao, dory izay anananao ary manaova lalàna vaovao." - Voltaire
"Any amin'ny faritany tsirairay, ny asa lehibe indrindra, araka ny filaharany, dia ny firaiketam-pitiavana, ny fifosana ratsy ary ny fitenenana tsy misy dikany." - Voltaire
"Amin'ny ankapobeny, ny zavakanton'ny governemanta dia ny fakana vola betsaka araka izay azo atao avy amin'ny antoko iray amin'ny olom-pirenena mba homena ny iray hafa." - Voltaire
"Ny tsy rariny amin'ny farany dia miteraka fahaleovan-tena." - Voltaire
“Tsy zavatra hafa ve ny politika fa ny kanto minia mandainga?” - Voltaire
“Finoinoana zaza tsy ampy taona ny fanahin’olombelona fa ny virjiny dia heverina ho hatsaran-toetra fa tsy sakana manasaraka ny tsy fahalalana amin’ny fahalalana.” - Voltaire
"Tsy azo atao ny mandika tononkalo toy ny mandika mozika." - Voltaire
"Aleo mampidi-doza mamonjy ny meloka toy izay manameloka ny tsy manan-tsiny." - Voltaire
"Mazava fa izay manenjika lehilahy iray, rahalahiny, satria tsy mitovy hevitra, dia biby goavam-be." - Voltaire
"Mampidi-doza ny manao ny marina amin'ny raharaha izay tsy mety amin'ny manampahefana napetraka." - Voltaire
"Tsara lavitra ny mangina toy izay mampitombo ny boky ratsy." - Voltaire
“Fady ny mamono; koa ny mpamono olona rehetra dia voasazy raha tsy mamono betsaka sy maneno ny trompetra”. - Voltaire
"Sarotra ny manafaka ny adala amin'ny gadra hajainy." - Voltaire
“Fitiavana izany; ny fitiavana, ny fampiononana ny karazan'olombelona, ​​ny mpiaro izao rehetra izao, ny fanahin'ny zavamananaina rehetra, ny fitiavana, ny fitiavana malefaka." - Voltaire
“Tsy ampy ny mandresy; tsy maintsy mianatra mamitaka.” - Voltaire
"Tsy ny tsy fitoviana no tena loza fa ny fiankinan-doha." - Voltaire
“Tsy mahagaga raha teraka indroa noho ny indray mandeha; ny zavaboary rehetra dia fitsanganana amin’ny maty”. - Voltaire
“Tsy ampy ny mijery sy mahafantatra ny hakanton’ny asa iray. Tsy maintsy mahatsapa sy voakasik’izany isika.” - Voltaire
“Lazaina fa eo anilan’ireo andian-tafika lehibe foana Andriamanitra.” - Voltaire
"Ny boky dia toy ny amin'ny lehilahy: vitsy dia vitsy no mandray anjara lehibe." - Voltaire
“Mitaky roa-polo taona ny olona hitsangana avy amin’ny zava-maniry izay ao an-kibon-dreniny, ary avy amin’ny toetra biby madio izay nihatra tamin’ny fahazazany, ho amin’ny toetry ny fahazazana, rehefa manomboka miseho ny fahamatoran’ny saina. Nitaky taonjato telopolo ny fianarana kely momba ny rafitra misy azy. Mila mandrakizay ny mianatra zavatra momba ny fanahiny. Mila fotoana fohy vao mamono azy. - Voltaire
“Tsarovy amin’ny fanontaniany ny olona fa tsy amin’ny valin-teniny.” - Voltaire
“Andeha isika hamboly ny zaridainantsika.” - Voltaire
“Aoka isika hamaky sy handihy; ireo fialam-boly roa ireo dia tsy hitondra fahavoazana ho an’izao tontolo izao na oviana na oviana.” - Voltaire
"Ny fahalalahana misaina no fiainan'ny fanahy." - Voltaire
"Ny fiainana dia vaky sambo, saingy tsy tokony hohadinointsika ny mihira eny amin'ny lakan'aina." - Voltaire
“Ny fiainana dia voafafy tsilo mafy, ary tsy misy fanafodiny hafa afa-tsy ny mandalo faingana eo aminy aho. Arakaraky ny hieritreretana ny loza ateraky ny lozam-pifamoivoizana, no lehibe kokoa ny heriny hanisy ratsy antsika. - Voltaire
"Ny fitiavana dia lamba vita amin'ny natiora ary voaravaka sary an-tsaina." - Voltaire
"Tiava ny fahamarinana, fa mamelà ny fahadisoana." - Voltaire
"Ny hadalana dia ny mieritreritra zavatra be loatra misesy haingana loatra, na zavatra iray manokana." - Voltaire
"Afaka ny olona amin'ny fotoana izay tiany." - Voltaire
"Ny fanambadiana no hany fitsangatsanganana misokatra ho an'ny kanosa." - Voltaire
"Andriamanitra anie hiaro ahy amin'ny sakaizako; hahafahako miaro tena amin'ny fahavaloko." - Voltaire
"Ny fisaintsainana dia ny famongorana ny eritreritra amin'ny fahatsiarovan-tena mandrakizay na ny fahatsiarovan-tena madio tsy misy tanjona, ny fahafantarana tsy misy eritreritra, ny fanakambanana ny fetra amin'ny tsy manam-petra." - Voltaire
“Mitovy ny lehilahy; tsy ny fahaterahana fa ny hatsaran-toetra no mahatonga ny fiovana”. - Voltaire
“Mifamaly ny lehilahy. Mihetsika ny natiora.” - Voltaire
"Ny olona dia mampiasa eritreritra fotsiny ho fahefana amin'ny tsy rariny ataony, ary mampiasa teny mba hanafenana ny eritreriny." - Voltaire
"Ho adala foana ny lehilahy, ary ireo izay mihevitra fa afaka manasitrana azy ireo no adala indrindra amin'ny rehetra." - Voltaire
"Mbola hafa noho ny tarehy ny saina." - Voltaire
"Ny fanahiko no fitaratry izao rehetra izao, ary ny vatako no vatany." - Voltaire
"Tsy misy hevitra mendrika handoro ny namanao." - Voltaire
"Tsy misy olana mahazaka ny fanafihan'ny fisainana maharitra." - Voltaire
"Tsy misy lanezy ao anaty avalanche mahatsiaro ho tompon'andraikitra." - Voltaire
"Ankehitriny, ry lehilahy tsara fanahy, tsy fotoana hanaovana fahavalo izao." - Voltaire
"Amin'ny fivavahana rehetra, ny Kristiana dia mazava ho azy fa tokony hanome aingam-panahy ny fandeferana indrindra, fa hatramin'izao dia ny Kristianina no tsy nandefitra indrindra tamin'ny olona rehetra." - Voltaire
“Ny olona iray dia manomboka amin'ny tsotra foana, avy eo tonga ny sarotra, ary amin'ny alalan'ny fahazavana ambony dia matetika miverina amin'ny farany amin'ny tsotra. Toy izany ny lalan’ny faharanitan-tsain’olombelona.” - Voltaire
“Hilamina ny zava-drehetra indray andro any, izany no antenainay. Tsara ny zava-drehetra androany, izany no illusion-nay. - Voltaire
"Ny fampiasana teny iray lehibe dia ny manafina ny eritreritsika." - Voltaire
"Ny fahamendrehana iray amin'ny tononkalo izay tsy ho lavin'ny olona: betsaka kokoa ary amin'ny teny vitsy kokoa noho ny prosa." - Voltaire
“Ny namanao ihany no mangalatra ny bokinao.” - Voltaire
"Ny hevitra dia niteraka aretina bebe kokoa noho ny areti-mandringana na ny horohoron-tany eto amin'ity planeta kely misy antsika ity." - Voltaire
"Ny optimisma dia ny fikirizana amin'ny fitazonana ny tsara indrindra rehefa ratsy indrindra." - Voltaire
“Ny maha-izy azy dia tsy inona fa fakan-tahaka feno fahendrena. Ireo mpanoratra tany am-boalohany indrindra dia nindrana nindramina. " - Voltaire
“Ny toetrantsika dia voaforon'ny hevitsika sy ny fihetseham-pontsika: ary, satria voaporofo fa tsy manome ny tenantsika na hevitra isika, dia tsy miankina amintsika ny toetrantsika. Raha miankina amintsika tokoa izany, dia tsy misy olona tsy ho tonga lafatra. Raha tsy mandinika dia mihevitra ny tenany ho tompon'ny zavatra rehetra; fa rehefa misaintsaina, dia ho tsapan’ny olona fa tompon’ny tsinontsinona. - Voltaire
"Ny asantsika dia miaro antsika amin'ny zava-dratsy telo lehibe - ny harerahana, ny faharatsiana ary ny fahantrana." - Voltaire
“Ny karazan-java-boary misy antsika dia natao ka izay mandeha amin’ny lalana voahitsakitsaka dia mitora-bato hatrany izay mampiseho lalana vaovao”. - Voltaire
“Lavorary ny fahavalon’ny tsara.” - Voltaire
“Ny fahalavorariana dia azo amin'ny ambaratonga miadana; mitaky ny tanan’ny fotoana izany.” - Voltaire
"Ny fitsarana an-tendrony dia ampiasain'ny adala amin'ny antony." - Voltaire
"Ny mamaky teny dia mamelona ny fanahy, ary ny namana mazava dia mampionona azy." - Voltaire
"Nanomboka ny fivavahana rehefa nifanena tamin'ny adala voalohany ny ratsy fanahy." - Voltaire
"Ny alahelo miafina dia lozabe kokoa noho ny lozam-bahoaka." - Voltaire
"Mandalo sy levona ny fahafinaretan'ny nofo, fa ny fisakaizana eo amintsika, ny fifampitokisana, ny fahafinaretan'ny fo, ny filalaovan'ny fanahy, ireo zavatra ireo dia tsy ho levona ary tsy ho levona mandrakizay." - Voltaire
“Toy izany ny toe-pon’ny olombelona, ​​fa ny mirary fahalehibeazana ho an’ny tanindrazany dia mirary soa ho an’ny mpiara-belona aminy”. - Voltaire
“Ny ranomaso no fiteny fahanginan'ny alahelo.” - Voltaire
"Ny zava-kanto amin'ny fitsaboana dia ny mampiala voly ny marary fa ny natiora kosa manasitrana ny aretina." - Voltaire
"Ny fampiononana ny manan-karena dia miankina amin'ny haben'ny famatsiana ny mahantra." - Voltaire
"Ny fahitana ny marina sy ny fampiharana ny tsara no tanjona roa lehibe indrindra amin'ny filozofia." - Voltaire
"Ny fampiononana lehibe indrindra amin'ny fiainana dia ny milaza izay eritreretin'ny olona iray." - Voltaire
"Ny tena mahafaly indrindra amin'ny fiainana rehetra dia ny fitokana-monina be atao." - Voltaire
"Ny fo dia manana ny antony tsy takatry ny saina." - Voltaire
“Ny atidohan’olombelona dia taova be pitsiny manana hery mahagaga ahafahan’ny olona mahita antony hanohizana hino izay rehetra tiany hinoana.” - Voltaire
"Ny kely tsy manam-petra dia manana avonavona tsy manam-petra lehibe." - Voltaire
“Toy ny afo ny fampianarana hitantsika ao amin’ny boky. Maka izany amin’ny mpiara-monina aminay izahay, mandrehitra azy ao an-trano, mampita izany amin’ny hafa, ary lasa fananan’ny rehetra.” - Voltaire
"Ny fahalianako hino zavatra iray dia tsy porofo fa misy ny zavatra toy izany." - Voltaire
"Arakaraka ny ieritreretan'ny fahoriantsika, no lehibe kokoa ny heriny hanisy ratsy antsika." - Voltaire
“Fitaratra tsy misy dikany ny fitaratra. Ny hany fomba hahitana tena marina dia ny taratry ny mason’ny hafa.” - Voltaire
"Arakaraka ny fantatry ny lehilahy iray no tsy dia miresaka izy." - Voltaire
“Arakaraka ny namaky bebe kokoa aho, dia vao mainka mahazo antoka aho fa tsy mahalala na inona na inona.” - Voltaire
"Arakaraka ny averimberina matetika ny hadalana no miseho ho fahendrena." - Voltaire
"Ny fanapahan-kevitra lehibe indrindra raisinao dia ny ho ao anatin'ny toe-po tsara." - Voltaire
“Tsy mankatò ny vava rehefa mimenomenona ny fo.” - Voltaire
"Ny hany fomba ahafantarana ny tian'ny mpahay matematika atao amin'ny Infinity dia ny fandinihana ny halehiben'ny hadalan'olombelona." - Voltaire
"Ny fikatsahana fahafinaretana dia tokony ho tanjon'ny olona misaina rehetra." - Voltaire
"Ny tsiambaratelon'ny maha-bevohoka dia ny milaza ny zava-drehetra." - Voltaire
"Ny teolojia dia ny fivavahana dia ny poizina amin'ny sakafo." - Voltaire
“Misy fahamarinana izay tsy ho an’ny olona rehetra, na ho an’ny fotoana rehetra.” - Voltaire
"Misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fitenenana amin'ny famitahana sy ny mangina mba tsy ho voahidy." - Voltaire
"Eritrereto ny tenanao ary avelao ny hafa hankafy ny tombontsoa hanao izany koa." - Voltaire
"Ireo izay afaka mampino anao ny hadalana, dia mety hahatonga anao hanao habibiana." - Voltaire
"Ny fihazonana penina dia ny ady." - Voltaire
"Raha te hahomby amin'izao tontolo izao dia tsy ampy ny adala - tsy maintsy mahalala fomba koa ny olona." - Voltaire
"Ny velona dia tokony hohajaina, fa ny maty kosa tsy ananantsika afa-tsy ny fahamarinana." - Voltaire
“Ny tsy fahatokisana dia toerana tsy mahazo aina. Saingy tsy mitombina ny fahatokisana. " - Voltaire
“Mitady fahasambarana avokoa isika rehetra, nefa tsy fantatsika hoe aiza no hahitana azy: toy ny mpimamo mitady ny tranony, nefa fantany fa manana ny tranony izy.” - Voltaire
"Tsy dia mirehareha izahay rehefa irery." - Voltaire
"Mijery an'i Scotland izahay amin'ny hevitray momba ny sivilizasiona." - Voltaire
“Tsy velona mihitsy izahay; eo am-piandrasana ny fiainana foana izahay. - Voltaire
“Tsy madio izahay, na hendry, na tsara; manao izay tsara indrindra fantatray izahay.” - Voltaire
“Inona no azonao lazaina amin’ny lehilahy iray izay milaza aminao fa aleony mankatò an’Andriamanitra toy izay mankatò ny olona, ​​ary vokatr’izany dia azony antoka fa ho any an-danitra izy raha manapaka ny tendanao?” - Voltaire
“Inona no atao hoe tantara? Ny lainga eken’ny rehetra. - Voltaire
“Inona no atao hoe fandeferana? Vokatry ny maha-olombelona izany. Isika rehetra dia noforonin’ny fahalemena sy ny fahadisoana; aoka isika hifamela heloka – izany no lalàna voalohan’ny zavaboary”. - Voltaire
"Na inona na inona ataonareo, torotoroy ny ratsy, ary tiava izay tia anareo." - Voltaire
"Raha tsy mahazo izay iresahana, ary tsy mahazo izay miteny ny tenany, dia metafizika izany." - Voltaire
“Raha resaka vola izany, dia mitovy fivavahana ny rehetra.” - Voltaire
"Na aiza na aiza alehako dia paradisa no misy ahy." - Voltaire
Teny tsara indrindra avy amin'i Jesosy Kristy
Inona no mitranga rehefa matory ianao